5 Zava-drehetra mba Lazao Ampahatsiahivo Azy Izy Mila Anao
Last nohavaozina: Mey. 23 2019 | 2 min namaky
Dia tena mora tokoa ny milaza ny zavatra izay mampiseho ny bandy tianao nefa, indrindra fa mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fifandraisana izay mandray ny bandy izahay amin'ny ho toy ny fanomezana, Matetika isika tsy mba. Indrindra satria amin'ny fifandraisana maharitra isika mahatsapa ho toy ny taloha izahay miharihary toy izany fihetsika feno fitiavana sy ho hany fa marina angamba ianao satria aina amin'ny namany. Fa izao rehetra ary avy eo dia misy kely, understated zavatra azonao hoe mba hampiseho aminao miraharaha sy mba hampahatsiahy azy fa mila anao izy toy ny be toy ny nataony tamin'ny andro tany am-boalohany, ary bebe kokoa izany ankehitriny.
SMS A Nice Message
Raha ny any am-piasana, tsotra “Manantena ny andro dia mandeha tsara” nandritra ny sakafo antoandro-fiatoana dia ho tena tsara ny fomba ny Maneho Fitiavana?. Izany dia maneho ianao mieritreritra azy sy no iahianao. Dia azo antoka ny manao azy mitsiky.
A Nice fiarahabana teny an-dalana Out-Baravarana
Ka nanao hoe: zavatra toy ny “Mirary tontolo andro finaritra” na “Karakarao tsara ny tenanao” rehefa an-dalana avy dia hasehoko anao miraharaha. Tsy mila hanoroka raha izany zavatra ataonao tsy toy ny veloma miarahaba matetika aza Azoko antoka fa ho nankasitrahany koa.
Asehoy An Interest
Zavatra izay olona tia ny mpiara-miasa ao dia olona iray izay mihaino azy ireo, satria izay mampiseho fa miahy azy ho toy ny olona. Fa matetika ny olona tsy tonga saina fa ny olona izy ireo amin'ny tsy liana tamin'ny azy ireo sy ny tombontsoany ka mampiseho azy ireo fa hanao. Mitete fotsiny ihany izany ho tena sendrasendra fotsiny ny resaka. Zavatra tahaka ny, “Izany fampisehoana tianao ao androany alina” mampiseho ianao mihaino.
Milaza zavatra tsara
Hitsara izay lazainao ny zavatra hevitrao hahatonga azy ireo sambatra. Noho izany ohatra raha mahay mitendry gitara lazao aminy izy ny milalao tsara ny chord, raha ho lamaody ny milaza azy, na dia toa tsara raha tia mozika lazao aminy izy ny tena fahalalana momba ny mozika. Indraindray isika dia nanjono rehetra ny hafahafa fiderana.
Lazao azy ireo tianao izy ireo
Maro ny mpivady tsy milaza izany matetika rehefa mahazo aina izy ireo amin'ny olona. Amin'ny fomba mazava tsara ny fitiavana dia misy ary azo inoana fa tsy mila lazaina fa ny fotoana rehetra rehetra, ary indray izao hampahatsiahivana azy ireo fa ataonao.
Mampiaraka – Sabotaging ny Tenanao Ianao?